CDP Choline Powder: Nyocha & Uru & Akụkụ Na-emetụta | AASraw
CDP Choline Powder: Nyocha & Uru & Akụkụ Na-emetụta Ọcha Na-adịghị
/blog/CDP Choline/CDP Choline Powder: Nyocha & Uru & Akụkụ Na-emetụta Ọcha Na-adịghị
Ihe na 05 / 05 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na CDP Choline.
Ihe niile banyere Pramiracetam ntụ ntụ
1.CDP choline Powder Reviews
2.CDP choline Powder-CAS: 987-78-0
3. Kedu ka CDP choline Powder Works
4.CDP choline Powder (987-78-0) - Usoro Omume
5.Typical CDP choline ngwakọ
6.CDP choline uru uru na mmetụta
7. CDP choline uru ntinye uru VS Alpha GPC Benefits
8. CDP choline Mmetụta nke Mfe
9. Ozi ndị ọzọ Na CDP choline Powder
10.CDP choline Powder Supplements
11.Otu esi cho CDP choline Online Powder
12.Question Na CDP choline Powder
1. CDP choline ntụ ntụ Nyocha
CDP choline ntụ ntụ bụ akuku nootropic nke ahụ bụ ihe ngwọta maka choline na uridine, na-enye ma mkpụrụ ndụ ndị ahụ ahụ ahụ na-esote ingestion nke CDP choline raw powder. Kpọmkwem, CDP choline ntụ ntụ na-apụ na choline na cytidine, tinyere cytidine na-agbanwegharị n'ime uridine. CDP choline raw ntụ ntụ bụ otu n'ime phospholipids atọ nwere akara nke nwere ike ịgbakwunye (nke abụọ bụ Alpha-GPC na phosphatidylcholine).
A na-edozi ndozi a iji gbochie ma ọ bụ na-emeso nsogbu mberede nke ebe nchekwa nke metụtara ịka nká n'ihi eziokwu ahụ bụ na mkpụrụokwu abụọ ọ na-ekwupụta bụ ndị na-adịghị edozi ma nwee ike ịmalite ịmụ ihe. Ọ bụ ezie na o yiri ka ọ dị irè karịa phosphatidylcholine (PC) na ọrụ a, n'akụkụ ụfọdụ n'ihi ịba ụba PC na ụbụrụ ya, ọrụ ya dịtụ ka nke ahụ Alpha-GPC.
CDP choline raw ntụ ntụ nwere ihe ọzọ nwere ike iji na-ekwu banyere cognition. A na-ejikarị ya eme ihe dị ka onye na-eme ka nchekwa na-eto eto n'oge ọ bụ nwata, ma n'agbanyeghị ụfọdụ ihe ngosi ndị na-egosi na nke a ga-ekwe omume na CDP choline ntụ ntụ, ọ dịghị ọmụmụ ihe ụmụ mmadụ n'oge a. Otu nnyocha e mere gosiri na mmụba dị nro na CDP choline ntụ ntụ (nke ọ dị mkpa ka a gbanwee ya), na CDP choline raw ntụ nwere ike ịnwe ọrụ dịka ihe na-egbochi mmadụ ịṅụ ọgwụ ọjọọ na cocaine na (ihe àmà mbụ na-egosi) nri.
2. CDP choline ntụ ntụ-CAS: 987-78-0
aha CDP choline ntụ ntụ
Aha ọzọ CDP choline ntụ ntụ, Cytidine-diphosphate choline
molekụla Formula C14H26N4O11P2
molekụla arọ 488.32
Melt Point 172-175 ° C
nchekwa temp friji
Agba White ntụ ntụ
3. Kedu ka CDP choline ntụ ntụ Na-arụ ọrụ?
CDP choline ntụ ntụ bụ psychostimulant nootropic nke na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ụzọ: ọ na-eweghachite ma na-edozi akpụkpọ anụ ahụ, ọ na-eme ka ogo dopamine dị na sistemụ ahụ bụ isi, ọ na-eme ka mmepụta nke neurotransmitter acetylcholine mepụta. A na-amụrụ ọtụtụ usoro ihe omume ya, ma n'adịghị ka ọtụtụ ndị na-enweghị ihe ọ bụla, CDP choline ihe omume na usoro ihe ọkụkụ nke ọma.
Na absorption CDP choline raw ntụ ntụ na-agbawa n'ime choline na cytidine wee gbasaa n'ime ahụ dum, na-agafe ihe mgbochi ụbụrụ ọbara ma banye n'ime usoro nhụjuanya ahụ. A na-eme ka cytidine ghọọ uridine, bụ isi ihe dị mkpa nke dị mkpa iji mee ka ọkpụkpụ akpụkpọ anụ na-eme ka ọ dịkwuo mma. Ihe cholineer na cholinergic, nke na - arịwanye elu nke ụbụrụ na ụbụrụ .Ọbụrụ na ọrụ nchịkọta Racetam Nootropics.CDP cholestergic na - eme ka ọ bụrụ ihe nkwado zuru ezu na racetam nootropics, nke na - adakwasị ụbụrụ maka ụbụrụ ha - arụ ọrụ.
Choline bụ ihe na-aga na acetylcholine neurotransmitter, bụ nke dị oké mkpa nye ọtụtụ akụkụ nke arụ ọrụ uche, karịsịa mmụta na ebe nchekwa. A na-ewere akụrụngwa Racetam nootropics dị ka piracetam acetylcholine agonists, ogige ndị na-eme ka mmepụta na ntọhapụ nke acetylcholine site n'ịkpalite saịtị ndị ntanetịtọta kwesịrị ekwesị.
Mgbe choline zuru ezu, mmụba mmepụta na ntọhapụ nke acetylcholine na-emepụta nkwalite nkwalite dị mma, site na ncheta dị mma iji lekwasị anya nke ọma, ntụgharị uche doro anya, ncheta ngwa ngwa, na ọbụna nghọta dị egwu. Ma mgbe choline inye ụbụrụ ụbụrụ na-ezughị oke mmetụta nke mgbakwunye racetam dị njọ. Tụkwasị na nke ahụ, obere isi ọwụwa nke na-ejikarị racetam eme ihe na-emetụtakarị na ọ gaghị ezu oke.
Maka ihe ndị a, ọtụtụ ndị ọrụ na-enweghị atụ na-atụle CDP choline ntụ ntụ a ga-eme mgbe ha na-ezukọkọta nchịkọta nke na-agụnye racetams. Onye ọ bụla bụ ụbụrụ dị ike dị na ya n'onwe ya, mana ya na ha nwere ike karịa onye ọ bụla nwere ike ịnọ na ya.
4. CDP choline ntụ ntụ Powder (987-78-0) -Usoro nke Action
Zụrụ CDP choline ntụ ntụ nnukwu Olee otú CDP choline raw powder si arụ ọrụ ozugbo ọ ruru ụbụrụ?
Ka ngwa ngwa ahụ na-abanye n'ọbara, nke ahụ na-emetọkwa ya, a na-agbajikwa ya na CDP choline raw powder na Cytidine Diphosphate. A na-ewere CDP choline ntụ ntụ dịka otu n'ime nri kachasị mkpa maka ahụike ụbụrụ na ime ka ike ụbụrụ sie ike. CDP choline raw powder na-eji ụbụrụ ụbụrụ gị mee ihe na Acetylcholine bụ nke na-adọta neurotransmitter jikọtara ya na synaptic plasticity. Site n'ịrụ ọrụ cholinergic, CDP choline ntụ ntụ nwere ike ịkwalite mmelite ncheta nke ọma, ikike ịmụ ihe, ilekwasị anya, itinye uche, na ọbụna nkwekọrịta dị mma na nkwụsị nsogbu.
CDP choline raw powder is often taken in a Nootropic stack with Piracetam, Aniracetam ma ọ bụ Noopept n'ihi na a na-atụkwasị ihe ndị a iji kwado ibe ha na-eduga ọbụna ọkwa dị elu nke ọrụ acetylcholine na neurons gị. CDP choline powder is incorporated into phospholipid Phosphatidylcholine. Ngwurugwu a gụnyere ụlọ na nrụzi ụbụrụ ụbụrụ, gụnyere mbọ gị.
N'ezie, nke a bụ otu ihe ahụ na-eme ka akpụkpọ ụkwụ nke ọtụtụ ụbụrụ na ụbụrụ akwara. Ọ na-anọchite anya 30 pasent nke ihe niile isi awọ dị n'ime ụbụrụ. Ka anyị na-etolite, akụkụ nke ihe ncheta ihe kpatara ya na arụ ọrụ nke ịchọgharị uche bụ n'ihi mkpụrụ ndụ ndị a na akpụkpọ anụ dị iche iche. CDP choline ntụ ntụ nwere ike ịrụzi mkpụrụ ndụ ndị a, na-enyere ha aka ịrụ ọrụ nke ọma ma na-ekwurịta okwu nke ọma karịa ibe ha.
Mgbakwunye a na-enye aka mee ka ụbụrụ na-eru ụbụrụ. A na-emezi ihe na-eme ka oxygen na glucose na ụbụrụ metabolism. Ọtụtụ mgbe, mmetụta ndị a na-ebute ike dị elu nke ike. Ọtụtụ ndị mmadụ na-enwekwa ike inwe ikike ka mma na-elekwasị anya ma na-echebara echiche, ụfọdụ na-achọpụta na ha nwere oge nlebara anya. Ụfọdụ ndị nchọpụta na-ele anya jiri CDP choline ntụ ntụ maka ụmụaka na ndị okenye na ADHD na ADD.
Ọ bụrụ na ịchọrọ n'ezie ịkwalite ọkwa gị na mkpali gị, ọ kachasị mma ijikọ CDP choline raw powder na ihe ndị ọzọ nootropics dị ka Noopept na Pramiracetam, ma mgbakwunye a nwere ike inwe mmetụta dị ike n'onwe ya. Nnyocha na CDP choline ntụ ntụ nọ na-ekwe nkwa n'oge a, ma a chọkwuru nyocha. N'oge a CDP choline ntụ ntụ dị na United States dịka ntinye ahụ ike, nanị FDA akwadoghị CDP choline raw ntụ ntụ dị ka ọgwụ iji gbochie ma ọ bụ mesoo ọnọdụ ọ bụla.
5. Ụdị CDP choline ntụ ntụ ntụ ntụ Ọnụọgụ ọgwụ
Ihe dị mma CDP choline raw powder dosing depends on many different factors including age, weight, sex, physiology, na sensitivities onwe onye. Ọ bụrụ na CDP choline ntụ ntụ ị na-eji kwa ụbọchị ga-adabere n'ezie na ihe mere i ji buru ya na mbụ Ntuziaka onu ogwu a bu ihe nduzi n'ozuzu, ma onu ogugu gi nwere ike di iche. A na-atụ aro ka ị gwa dọkịta gị okwu iji chọpụta usoro kachasị mma maka mkpa gị.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ iji nweta ụfọdụ uru bara uru e depụtara n'elu, mgbe ọtụtụ ndị ọkachamara na-atụ aro ka ị nọrọ ebe ụfọdụ na 500 ka 1,000 mg kwa ụbọchị.Nke nlele na ntanetị nwere ike igosi na ị na-eji ihe ndị ọzọ, ma ọ bụghị ndụmọdụ na ị na - amalite na nnukwu dose. Ihe ọzọ ị ga - achọ iburu n'uche bụ izere iwepụta CDP gị na ntụ ntụ ntụ n'oge mgbede, ebe ọ bụ na ọ nwere ike iduga na ume nke nwere ike ime ka ọ dị ike ịda ụra.
N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ nwere ike ịba uru ịba ụbụrụ karị ma ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ site na nke dọkịta gị nyere CDP choline ntụ ntụ. Ọ ka dị obere maka ndị dọkịta na North America ịkọwa mgbakwunye a, mana ọ na-adịkarị na Europe ebe CDP choline ntụ ntụ ejiri ya mee ihe maka ndị lanarịrị ọrịa strok na ndị okenye na-enweghị ihe nchekwa .Ọ bụrụ na ọnọdụ a metụtara gị, ị ga-ahụrịrị dọkịta na-ekwurịta okwu tupu iwere mgbakwunye nootropic.
6. CDP choline ntụ ntụ Bekwesiri na mmetụta
CDP choline ntụ ntụ bụ ihe dị n'ime imepụta akpụkpọ anụ phospholipids nke gbara gburugburu cell ọ bụla nakwa maka ịme acetylcholine dị mkpa, dị na ụbụrụ na ahụ. A kwadoro ihe oriri a na Europe na Japan maka ọrịa strok, ọrịa Parkinson na ọrịa ndị ọzọ na-adịghị na ahụ ma na-ere ya site n'aka aha Citicoline. N'ụzọ ụfọdụ, ị nwere ike ịlele ya dị ka ụdị nke choline. Nnyocha na-egosi na CDP choline raw ntụ ntụ na-enyere aka mee phosphatidylcholine n'ime ụbụrụ ụbụrụ mmadụ; enwekwu acetylcholine synthesis; eme ka uche ndị mmadụ na-arịa ọrịa ọrịa Alzheimer; na ọbụna mma ncheta na ndị agadi na-arịa ọrịa na deficit deficits. Nnyocha ndị Belgium gosiri na nchịkwa nke nkịta na-eme ka ha nwekwuo ike ịmụta na icheta.
Emebeghị ka mgbakwụnye mgbakwunye a mara nke ọma mana ọ ghaghị ịbụ na ọ na-enye ọtụtụ uru ntụgharị uche. Ị nwere ike ịzụta CDP choline raw ntụ ntụ site n'onwe ya ma ọ bụ na usoro nchịkọta nke na-enye ọtụtụ ụbụrụ ụbụrụ dị mkpa n'otu oge ahụ.
1) obere CDP choline ntụ ntụ Ọkwa ga-akpata ajọ mmerụ ahụ
CDP choline ntụ ntụ dị mkpa iji mee Phosphatidylcholine. Phosphatidylcholine dị mkpa n'ịkụda egbugbere ọnụ n'ime imeju. N'ihi ya, obere CDP cholesterol nwere ike iduga ịba uru na imeju. N'ime nnyocha a na-eme na ndị okenye ahụ, nnukwu pasent nke isiokwu gosipụtara obere CDP cholesterol diets mepụtara ọrịa araju araba na nsogbu ndị ọzọ na imeju. A gbanwee mmetụta ndị a mgbe a na-etinyekwu CDP choline ntụ ntụ n'ime nri. Mbibi mmebi nke obere CDP cholestaine nwere ike ime ka oke ibu, ọbara mgbali elu, ma ọ bụ insulin resistance.
2) CDP choline ntụ ntụ nwere ike belata inflammation
CDP choline raw ntụ ntụ egosipụtara iji belata ọkwa nke mmeghachi ihe na-emetụ n'ahụ. Agonism nke ụfọdụ ndị nabatara acetylcholine bụ ihe mgbochi na-egbu egbu.CDP choline ntụpụ nwere ike ime ka ihe nrịbama nke ọrịa ndị na-egbu egbu dị ka Asthma dị mma.
3) CDP choline uzuzu achọrọ iji mepụta Myelin ma mee ka mmelite dị elu
Choline bụ ezigbo ihe oriri maka myelin, nke dị oké mkpa maka ọgụgụ isi na IQ. N'àgwè anụmanụ nke multiple sclerosis, CDP choline raw powder na-arụpụta uru bara uru na myelin, oligodendrocytes na axons.Anyị na-ebute ọgwụ, CDP choline ntụ ntụ eme ka mbelata nke mpempe dị mma ma megharia mpempe akwụkwọ mgbagwoju anya nke igwe. Ọnụ ọgụgụ nrịbawanye sitere na mmụba nke ọnụ ọgụgụ nke oligodendrocytes na oligodendrocyte precursor cells na-amụba.
4) CDP choline ntụ ntụ Nwere ike inye aka meziwanye arụmọrụ
Acetylcholine bụ ihe dị mkpa dị n'ime usoro nhụjuanya. Ọ bụrụ na ọ bụghị acetylcholine, usoro ahụ nwere ike ghara izipu ihe ọmụma n'ime ahụ ahụ. Ọdịda mmuta na-emekarị, na nke ụfọdụ, n'ihi ụkọ acetylcholine. Site n'ịba ụba nri, isiokwu nwere ike ime ka acetylcholine dị elu, belata ụbụrụ egbutu ma chekwaa usoro ụjọ ahụ site na mbelata. Nnyocha e mere gosiri na isiokwu ndị na-ewere CDP choline powder caffeine mmanya ka mma enwere ike ime ihe na-eche echiche.Ọmụmụ ihe ndị ọzọ gosiri na CDP choline ntụ ntụ nwere ike inye aka meziwanye ihe ndị a na-achị .
5) CDP choline ntụ ntụ nwere ike inye aka meziwanye mgbaàmà nke ọrịa Alzheimer na Ọrịa Parkinson
Ọnwụnwa egosiwo na ọnụọgụ CDP cholesterol dịkwuo mma enwewo ihe mgbaàmà nke ndị ọrịa nwere ọrịa Alzheimer dị nro. Ọrịa Parkinson bụ nsogbu nke ụbụrụ moto na-akpata, nke na-eme ka nrụgide na ịma jijiji na njedebe dị iche iche.Dudies egosiwo na CDP choline ntụpụ nwere ike inyere aka kwado mgbaàmà ndị a.
6) Lower CDP choline ntụ ntụ Nrịgo nwere ike ime ka ọrịa cancer gbanwee
Ogologo Homocysteine ​​dị elu bụ ihe kpatara nsogbu nke Cancer.Enweghị CDP chople raw powder needed to break Homocysteine, ihe ize ndụ nke ịmalite ịrịa ọrịa cancer nwere ike ịbawanye ụba .Ma, otu nnyocha chọpụtara na ọkwa dị elu CDP cholestais na-enwewanye ihe ize ndụ nke ọrịa cancer prostate na-egbu egbu. CDP choline raw powder na-elekwasị anya na mkpụrụ ndụ cancer kansa prostate, na nyocha ọbara nke CDP choline ntụ ntụ jikọtara ya na ihe ize ndụ nke ọrịa cancer prostate. Ọmụmụ ihe gosiri na ogo dị elu nke CDP choline ntụ ntụ na nri nwere ike ibelata ihe ize ndụ nke ịzụlite ara ọrịa cancer. Ọmụmụ ihe gosikwara na mmụba dị na mkpụrụ ndụ nke na-akụda CDP choline raw powder nwere ike ime ka ihe ize ndụ maka ịrịa ara ara na-ebuwanye ibu.Bottom line: CDP choline ntụ ntụ bụ ihe dị oké mkpa iji gbochie kansa cancer.
7) CDP choline ntụ ntụ May Enyemaka Schizophrenia, Bipolar na Autism
Schizophrenia na autism nwere ike kpatara ụkọ ígwè n'ekpere mgbe ọ na - emegharị ahụ. N'ime ụdọ, a chọpụtara na CDP choping ngwungwu ntụpọ nwere ike inye aka belata ihe ize ndụ nke isiokwu ndị na - abaghị uru na - emepụta nsogbu ndị a n'oge na - adịghị na ndụ .Sazophrenia na autism mepụtara n'ihi mkpụrụ ndụ a pụkwara izere prisposal site na prenatal CDP choline raw supplements nke ntụ ntụ. N'ọmụmụ ihe a na-eme na isiokwu dị na Schizophrenia, isiokwu ewere CDP choline ntụ ntụ gosipụtara cognition dị mma ma na-arụ ọrụ na nchekwa mgbe ọgwụgwọ gasịrị. Ọmụmụ ihe ole na ole egosiwo na CDP choline ntụ ntụ nwere ike inyere aka na-agwọ ọrịa bipolar ma nwee ike bụrụ ihe bara uru na-arụ ọrụ ọgwụ.
8) CDP choline ntụpụ nwere ike ime ka ndị nhụjuanya ahụ dịghachi mma site na nhụjuanya obi
Mgbake site na nhụjuanya ụbụrụ nwere ike ịbụ ogologo ọganihu na ọbụna na-egbu egbu. A gosipụtara CDP choline ntụ ntụ iji nyere ụbụrụ aka ịgbake site na mmerụ ahụ ọnyá.
9) Nkwa dị elu nke CDP choline ntụ ntụ May Enyemaka Mee Ka Egwuregwu Ọrụ Ọganihu
Nnyocha e mere gosiri na ogo elu nke Alpha GPC, bụ isi nke CDP choline raw powder, nyeere aka meziwanye ihe dị arọ na mmemme .Ụlọlụ gosipụtara mmebi ahụ mgbe ọ dị obere CDP cholesterol nri.
10) Ndị elu dị elu nke CDP choline ntụpụ nwere ike ibelata agụụ
E gosipụtara ọkwa nke CDP choline ntụ ntụ nke 2000mg / ụbọchị iji belata agụụ agụụ.
11) CDP choline raw ntụ ntụ Nwere ike inyere gị aka ịṅụ ọgwụ ọjọọ
Ụfọdụ ihe akaebe egosiwo na CDP choline raw ntụ ntụ nwere ike belata ịṅụ ọgwụ ọjọọ dị ka cocaine.
12) CDP choline ntụ ntụ dị mkpa maka mmepe mmepe
CDP choline ntụ ntụ dị ezigbo mkpa na mmepe nwa ebu n'afọ. Ọtụtụ nwanyi ime ime anaghị eri CDP choline raw powder. Na mmalite afọ nke nwa ọhụrụ mgbe nne na-enye nwa ara, ọ dị mkpa na nne na-erepịa CDP choline ntụ ntụ. CDP choline ntụ ntụ dị mkpa maka ịmepụta usoro nhụjuanya, na - akwalite sistemụ cell na mmepụta anụ ahụ. Dịka ihe dị mkpa maka acetylcholine, CDP choline raw powder dị mkpa maka mmepe nke ụbụrụ nwa ebu n'afọ. Ihe na - enwe afọ iri na ụma, nke a na - ejikwa "nsogbu anụ ahụ, mmekpa ahụ na - ahụ maka nhụjuanya, na ụkọ ihe na - adịghị mkpa, gụnyere ọgụgụ isi, isi, na enweghị ncheta." Ụlọ akwụkwọ egosiwo na CDP choline ntụ ntụ nwere ike inye aka belata mgbaàmà nke nsogbu dị otú ahụ.
13) CDP choline ntụ ntụ dị mkpa na Ịchọpụta okwu Gene N'oge mmepe
Okwu mmeghari okwu bụ akụkụ dị mkpa nke ịchọpụta ọdịdị nke mmadụ. A na-agbanyụ mkpụrụ ndụ dị n'ime ahụ mgbe ndị ọzọ na - agbanye.Ọtụtụ akụkụ nke okwu mkpụrụ ndụ na - ekpebi n'oge nwa ebu n'afọ. A na - agbanyụ mkpụrụ ndụ ihe nketa site na DNA methylation ka mkpụrụ ndụ ndị ọzọ ka dị on.Betaine, CDP choline powder metabolite, dị mkpa iji nye methylation enzymes na methyl iche iche .Ọ bụrụ na ọ bụghị isi iyi nke ìgwè methyl, methylation apụghị ime na okwu nke mkpụrụ okwu enweghị ike ịgbanwe.
14) Lower CDP choline powder Levels May Prevent Proper Lipid Metabolism in Intestines
Phosphatidylcholine dị oké mkpa maka lipid metabolism n'ime eriri afọ.N'ihi na CDP choline raw powder dị mkpa iji mee phosphatidylcholine, obere CDP choline ntụ ntụ nwere ike ịkwụsị mmepụta. Ọmụmụ ihe a na-eme na oke ụbụrụ gosiri na obere CDP choline raw ntụ ntụ na-eduga n'ọkwa dị elu nke unmetabolized lipids n'ime eriri afọ. E gosikwara na obere CDP choline ntụ ntụ na-eduga ná nbelata akụkụ nke akụkụ ahụ mgbu na-ekpo ọkụ.
15) CDP choline ntụ ntụ nwere ike inyere aka mepụtawanye mgbaàmà nke Glaucoma
Glaucoma bụ ọrịa nke nrụgide na-akpata n'azụ akwara. Ọrịa ahụ nwere ike iduga ìsì. Ọmụmụ ihe gosiri na mgbe a na - enye ọrịa ndị CDP choline ntụpọ, ihe mgbaàmà nke Glaucoma dịwanye mma. Nke a na - egosi na ọgwụgwọ na CDP choline raw powder nwere ike inye aka na ọgwụgwọ ndị ọzọ maka Glaucoma.
Enweghị onye na - enweghị ike ịba uru site na ụbụrụ ụbụrụ, nghọta doro anya, na nnweta mmelite ọnọdụ na CDP choline raw powder. Nchịkọta nchọpụta gburugburu ebe nchekwa dị mma maka ụdị ọrụ ọ bụla, yana ọtụtụ egosipụtara na edepụta mmetụta dị mma nke nwere ike na-eche ozugbo na ị na-ewere ihe mgbakwunye ahụ. Ndị na-enwe ahụ ike zuru oke na ọbụna ndị nwere nkwarụ dịka ndị na-agbapụta ọrịa strok na ndị ya na Alzheimer nwere nwere ike iji CDP choline ntụpụ n'enweghị ihe ọ bụla ma hụ mmụba na ncheta na ọnọdụ ha.
7. CDP choline ntụ ntụ Uru VS Enwere uru Alpha GPC
Ahụ na-atụgharị na CDP choline ntụ ntụ, nke a na-agbaji n'ime phosphatidylcholine. Phosphatidylcholine bụ ụdị ụlọ nkwakọba ihe nke anụ ahụ. O nwere ike inyere aka ma ọ bụ ihe e ji akpụ akpụ akpụkpọ ahụ, kama ọ na-emepụta acetylcholine mgbe ọ dị mkpa.
Alpha GPC nọ na njedebe nke usoro si CDP choline ntụ ntụ. Alpha GPC bụ proproduct nke phosphatidylcholine kama nke precursor. N'ụzọ bụ isi, ihe nke a pụtara na na usoro choline metabolism, CDP choline raw ntụ ntụ dị nso na ebe mbụ choline na Alpha GPC dị nso na ụdị nke sel.
Nke ahụ bụ n'ezie ajụjụ siri ike nke na-agbata maka arụmụka. Enweela ihe ọmụmụ abụọ na-atụnyere ha abụọ mgbe a na-agbanye ha ọkụ. N'ọmụmụ ihe mbụ, Alpha GPC yiri ka ọ na-eme ka ọrụ ịchọrọ uche karịa CDP choline raw powder na nke abụọ, Alpha GPC mere ka ọkwa ọkwa plasma elu dị elu. Ọ bụ ezie na Alpha GPC yiri ka ọ bụ onye na - eto eto, ọ na - eche na ụzọ ingestion nwere ike inwe mmetụta nakwa na ọkwa plasma nwere ike igosi ọkwa dị elu nke CDP choline ntụ ntụ.
Mgbe a naghị eji isi tụnyere isi, ma Alpha GPC na CDP chopụtara ntụ ntụ dị ka egosila na ọ dị irè. N'ihe na-ekwekọghị ekwekọ na mgbakwunye elu, ụzọ kachasị mma bụ iji nwalee ha. Ị nwere ike ịmalite ma ọ bụ otu maka izu ole na ole, wee gbanwee. Ọ bụrụ na otu onye rụọ ọrụ karịa nke ndị ọzọ mere maka gị, ị nweta onye mmeri! I nwekwara ike iji ha mee ihe n'otu oge iji jide n'aka na usoro ahụ dum kpuchie.
N'ihe banyere nri ndị dị mkpa, choline bụ onye na-aga n'ihu n'ịnọgide ụbụrụ na ahụ ike. Choline na-arụ ọrụ dị mkpa na njikọ nke membranes, bụ nke na-eburu ihe oriri nke onwe ha.
N'ime ụbụrụ, choline bụ precursor ka acetylcholine, nke na-enyere aka ịnọgide na-arụ ọrụ ahụ ike. Mkpa nke ọkwa dị mma kwesịrị ịba ụba n'oge ndị toworo eto mgbe njikọ nke acetylcholine kwụsịrị, na-eme ka ebe nchekwa na ọrụ uche na-ada ngwa ngwa.
N'ime obere oge na ikpe, a na-eji mmetụta nke afọ na-echeta dị ka egwuregwu ma ọ bụ mgbaghara mgbe mmadụ na-echefu ihe, ma na nsogbu ndị ọzọ, enwekwaghị ike icheta ihe nchekwa.
Choline nwere ike na-etinye obi gị dum site na nri. Ihe oriri dị ka àkwá na anụ dị elu karịa ndị ọzọ, ma ndị a bụ otu ihe oriri ndị ahụ a kwadoro na ebubo ụgha na-akpata ọtụtụ ọrịa ndị ọzọ. N'ihi nke a, ọtụtụ ndị America na-achọpụta ihe na-adịghị mma, na atụmatụ 10% ma ọ bụ mmadụ ole na ole, ndị inyom, na ụmụaka na-enweta choline kwa ụbọchị. Nke a na-esikarị nsogbu nye ndị anaghị eri anụ na ndị na-anaghị eri nri ndị a na nri ha.
Ọ bụrụ na enweghi erughị eru, ahụ na-ebute ihe owuwu nke membranes, na-ahapụ ụbụrụ na azụ ọkụ. Na mgbakwunye na iri ihe oriri ndị ọzọ na-eri, choline ihe mgbakwunye bụ ụzọ siri ike iji mụbaa oriri, karịsịa na ndị agadi. Ihe ngwugwu abuo abuo na bioavailability di elu bu CDP choline powder na Alpha GPC. Ọ bụ ezie na ha dị iche iche n'ụzọ dị iche iche, ha abụọ dị irè ebe ọ bụ na ha na-eme na ọkwa dị iche iche nke nchikota nke choline.
8. CDP choline ntụ ntụ
CDP choline ntụpọ mmetụta ndị na-ahụ maka ọgwụ ndị na-agwọ ọrịa na-edepụta CDP choline raw ntụ ntụ dị ka Obere Nchekwa maka ojiji nke ndị okenye. A na-anabata CDP choline ntụ ntụ mgbe a na-ewere ya na ntinye kwesịrị ekwesị.
Ọ bụ ezie na mmetụta ndị dị obere adịghị adị, enwere mmetụta dị nwayọọ ole na ole na ejikọta na mgbakwụnye mmezi a. Ndị a gụnyere mmetụta dị ka isi ọwụwa, ike ọgwụgwụ, ụjọ, ọgbụgbọ, afọ ọsịsa, na nsogbu GI ndị ọzọ. N'okwu ndị siri ike ọ pụrụ ịkpata nkwụsị ọbara na / ma ọ bụ dizziness.
Ọzọkwa ọtụtụ n'ime mmetụta ndị a dị nnọọ obere. Ntinye mmezi a nwere oke ogwu na-egbu egbu ma kwesiri ka aturu anya ya dika onye o bula ma e wezụga nne ime na umuaka (nani n'ihi enweghi ihe akaebe na ule maka nchekwa).
N'ozuzu, CDP choline ntụ ntụ bụ nchekwa, mgbatị dị irè nke nwere ike inye aka melite ncheta, nchebara echiche, na nlebara anya, ọ pụkwara inye ọtụtụ ndị bara uru ma ndị na-eto eto ma ndị okenye.
9. Ozi ndị ọzọ gbasara CDP choline ntụ ntụ ntụ ntụ
CDP choline ntụ ntụ, ma ọ bụ Citicoline, bụ ebe choline nke egosiri iji nyere aka melite ncheta na ọrụ nyocha nke ndị ọrụ ya. A na - atụ aro CDP choline raw ntụ ntụ iji mee ka mmụba dị na density dopoma, ma dị mma na ojiji nke ịgwọ ma ọ bụ na-enyere aka na Nsogbu Nsogbu.
CDP choline raw powder bụ isi iyi nke Acetylcholine na mmiri nke nwere mmiri mmiri nke klas choline. A na-eji CDP choline ntụ ntụ enyere aka ma na-emeso Alzheimer na mgbakwunye Nootropic iji nyere aka melite ma melite ebe nchekwa na cognition.CDP choline raw powder egosiri na ọ na-egbochi mmebi ahụ na-eme ka ọ ghara ịdị na-emepụta ma belata ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụ ndụ apoptotic dị. CDP choline ntụ ntụ na-enye aka melite ọrụ anya na ndị na-ata ahụhụ site na Glaucoma, na Amblyopia. A maara CDP choline raw ntụ ntụ iji nyere aka iwelie glucose metabolism n'ime ụbụrụ yana ụba ọbara ọbara.
N'otu nnyocha, a gosipụtara CDP choline ntụ ntụ iji nyere aka mee ka ọganihu nke Alzheimer dị ntakịrị ma bụrụ ihe mgbakwunye dị mma n'ịme ka ike na nchekwa dịwanye na ikike nghọta. Nnyocha a gosikwara na n'ọnọdụ hypoxia na ischemia, CDP choline ntụ ntụ rụrụ dịka mgbatị nchebe neuro yana ọgwụgwọ dị irè na ọrịa Parkinson. CDP choline raw ntụ ntụ: ụlọ ọgwụ na nlebara anya.
CDP choline raw powder is very bio-available and having potential benefits in relation to neuro-repair and increasing acetylcholine levels in the central and terrestrial nervous system, CDP choline ntụ ntụ e ji mee ihe n'ọtụtụ akwụkwọ ederede iji mee ihe iji nyere aka na ọtụtụ ọnọdụ sitere na Ọkụ, ụbụrụ ụbụrụ, na Alzheimer's. E gosiputara na inwe mmetụta bara uru n'ọtụtụ n'ime ọnọdụ ndị a banyere mgbake na-agwọ ọrịa.
10. CDP choline ntụ ntụ Nzuzu Smmeju
CDP choline ngwa ngwa ngwusiri ngwa ngwa nwere ike ịzụta site n'aka ndị ọkachamara agbụrụ, ma dịkwa na ụfọdụ ụdị ejiji dịka Jarrow Formulas. Tụlee a nhazi choline dị ka CDP choline ntụ ntụ nwere ike ịbụ ezi echiche ma ọ bụrụ na ị chere na ị naghị enweta nri zuru ezu. Nri dị ka nnu, àkwá, azụ, na mkpụrụ dị elu dị mma ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ihe oriri ndị ọzọ, ma a ka chọrọ nnukwu ego iji mee ihe dị mma kwa ụbọchị. O yiri ka ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka ịbịaru nso na-adabere na nri. Mgbe ị na-atụle CDP choline raw powder supplement, e nwere ihe abụọ dị mkpa iji tụlee n'elu ọtụtụ ndị ọzọ. Otu; jide n'aka na ị na-enweta ngwaahịa gị site na onye nrụpụtara na-emewanye ntụkwasị obi na abụọ; Buru n'uche na ọkara nke CDP choline raw powder bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa 60-nke pụtara na a ga-enwe ike iji ọgwụ kwa ụbọchị. Ihe mgbakwunye a dị mma n'oge oge ị na-eche na ị gaghị enwe ike ịnweta ihe oriri, ma ọ bụ na-eji ogige acetylcholine-ọkụ dịka Racetams. Ụdị ogige Nootropic ndị a nwere ike na-agba ọkụ ngwa ngwa site n'ikike nke anụ ahụ gị, nke nwere ike ibute isi ọwụwa na ụdị nsogbu ahụ ike na nke anụ ahụ. A na-ere CDP choline ntụ ntụ dị ka usoro nchọpụta Cognizin nke a na-emepụta nke Kyowa 5 mere. Nke a bụ Cytidine 5-Di Phosphate Choline ụdị nke mepụtara site na usoro Kyowa a mapụtara. Ihe ndi ozo nke nwere onyinye a bu ihe kachasi elu, ebe a na-ejikwa ihe ndi mmadu na-emeputa.
11. Olee otú ịzụta CDP choline ntụ ntụ Ngwá n'Intanet?
Mgbe ị na-ekpebi iji CDP choline raw ntụ ntụ dị ka mgbakwunye, otu n'ime ajụjụ mbụ ịza bụ ụdị ụdị ga-arụ ọrụ kachasị mma maka gị.
CDP choline raw powder is available in format powdered, dị ka pill na ọbụna dị ka mmiri mmiri injection.While usoro nnyefe bụ ihe gbasara mmasị onwe onye, ​​e nwere ihe ụfọdụ nwere ike ime ka ị kpebie otu ụzọ maọbụ nke ọzọ.
Nke mbụ, powdered CDP choline ntụ ntụ na-ahụ iji nwee ngwa ngwa n'ihi na enwere ike itinye ya ngwa ngwa n'ime ọbara. Ihe odide a kwadoro na-emekwa ka ọ dịkwuo mfe ịchịkwa ma hazie ọnụọgụ gị.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere CDP choline raw powder capsules nke bụ 500mg, ị ga-ebu mgbakwunye na 500mg increments. Na ntụ ntụ, ị nwere ike ịchọrọ iji 250mg naanị n'otu oge, jikọta ya na mmiri gị ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ gị.
N'ezie, mkpụrụ ọgwụ na-emeri n'ọgụ ahụ dị mma ebe ọ bụ na ọ gaghị adị mkpa ka ị nyochaa doses gị na seto spoons ma ọ bụ atụle ihe. Ma, ị nwere ike ịmepụta capsules gị onwe gị mgbe niile n'ụlọ site na ntụ ntụ site na iji igwe nsị dị mfe.
N'ikpeazụ, ọdịiche dị ukwuu n'agbata abụọ bụ nke ọnụahịa: nnukwu CDP choline ntụ ntụ bụ ruo 5 ugboro dị ọnụ ala karịa nhọrọ aha pill brand.
12. Ajụjụ Na CDP choline ntụ ntụ ntụ ntụ
★ Kedu ihe CDP choline raw ntụ ntụ powder azọrọ?
Ihe omumu nke sayensi bu ihe omuma
A na-anwale ebe a na-enyocha ule kachasị ọcha
Akpadoro ya site na ihe kacha mma
Ndị ọrụ nlekọta ahụike kwadoro ma kwadoro ha
★ Kedu ihe bụ CDP choline raw ntụ ntụ powder Uru?
CDP choline raw ntụ ntụ bụ onyinye nke mere nnyocha dị omimi
• Enwere ike ịzụta ihe mgbakwunye site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti rụrụ
• Ọ bụ otu ụlọ ọrụ nwere aha ọma
★ Kedu ihe bụ CDP choline ntụ ntụ?
Onye na-emepụta ahụ kwuru ụfọdụ n'ime mmetụta ndị na-akpata iwepụ CDP cholesterol ntụ ntụ. Ha depụtara ha na ebe nrụọrụ weebụ ha nke nwere ike ịkpata esemokwu oke ahụ, nke jikọtara na isi ọwụwa, nkiri olu, na mgbagwoju anya. Ndị ọrụ ole na ole nwere ike ịmepụta ísì mmiri na-adabere na CDP cholesterol na mmebi na eriri afọ.
★ Ogologo oge ole ka ọ ga - ewe iji gosipụta ihe a?
Onye na-emepụta emebeghị ka o doo anya ogologo oge Vitamin Research CDP choline ntụ ntụ na-egosi iji gosi nsonaazụ.
★ Ebe ịzụta CDP choline ntụ ntụ powder na ego ole?
- Kpọtụrụ anyị site na usoro ịjụ ajụjụ email anyị, ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọrụ ahịa skype (CSR).
-enye anyị ajụjụ gị (CAS: 987-78-0) nnukwu na adreesị.
- Ntuziaka CSR ga-enye gị nkọwa, okwu nkwụ ụgwọ, nọmba nchịkọta, ụzọ nnyefe na ụbọchị mbata echere (ETA).
- A ghaghị imepụta ihe ndị ahụ na ngwa ngwa na 12 awa (N'ihi na n'ime 10kg).
- A nabatara ezi ego ma kwuo ihe.
Tags: zụta CDP Choline Powder, CDP Choline Powder
Zụrụ ọgwụ ọjọọ Drug Sunifiram n'igwe	Ihe niile I Kwesịrị Ịmara Tupu Ịzụta LGD-2226 Powder